Vaovao - Tonga tany amin'ny orinasanay ny mpanjifa avy any Aostralia, Singapour, Thailand nandritra ny roa andro sy ny fitsidihana nataony.
Nifantoka tamin'ny tady tariby tsy misy fangarony 1x61mm, ,42mm izy ireo, nandritra ny famotorana, nitsidika ny toerana famokarana ny mpanjifa ary nijery ny fizotry ny famokarana santionany tariby tsy misy fangarony 1 × 61 mm, 42mm, avy eo ny kaonferansa teknolojia tariby momba ny nitazona ny tady tariby vy
Ny mpitsidika dia afa-po tamin'ny teknolojia sy ny fitaovan'ny orinasa misy anay, maneho ny fahatakarana ny ho avy sy ny fikasana fiaraha-miasa .Ny tontolon'ny fifandraisana roa dia tena tsara, izay napetraka ho fototry ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy.
Fantatra fa ny orinasanay dia hahazo mihoatra ny 1 000Ton kaomandy 1x61mm, tady tariby vy tsy metaly ∮42mm raha toa ka tafita ity fiaraha-miasa ity.
Ny vokatra lehibe indrindra dia ny tadin'ny ascenseur, tady fitrandrahana, tady sambo, tady solika, tady masinina seranan-tsambo, sns. Izy io koa dia afaka mamokatra tady vy tariby isan-karazany arakaraka ny filan'ny mpanjifa, miaraka amin'ny vokatra 15.000 taonina isan-taona, izay mamokatra tadin'ny tariby vy. miaraka amin'ny savaivony 6.0mm-42.0mm. Ny orinasa dia manana hery ara-teknika matanjaka: ny orinasa dia manana manam-pahaizana teknika avy amin'ny Tianjin Yisheng tany am-boalohany izay nirotsaka tamin'ny famokarana tady tariby vy nandritra ny taona maro.
Inona avy ireo fomba fampiasana sy fikojakojana marina ny tady tariby?
(1) Ny hafainganam-pandehan'ny tadin'ny tariby mihazakazaka dia tokony ho marin-toerana mandritra ny fandidiana, ary tsy tokony hihoatra ny enta-mavesatra izany mba hisorohana ny enta-mavesatra;
(2) Fikojakojana Ny tady tariby vy dia nopetahany diloilo ampy rehefa namboarina, fa aorian'ny fandidiana, hihena tsikelikely ny menaka, ary ny vodin'ny tady vy dia hibontsina vovoka, fako sy loto hafa, ka mahatonga ny tariby vy tady sy amboara hitafy sy harafesina. Noho izany dia tokony diovina sy alefa amin'ny solika tsy tapaka izy io. Ny fomba tsotra dia ny fampiasana borosy tariby sy fitaovana hafa mifandraika aminy mba hamafana ny vovoka sy ny loto hafa ambonin'ny vatan'ny tariby, ary apetaho amin'ny menaka ambonin'ilay tady tariby nafafy na ambonin'ilay tady tariby ilay izy, na esory Menaka 30 na 40 an'ny motera eo ambonin'ny tariby tariby, Aza manofa be loatra anefa ary mandoto ny tontolo iainana;
(3) firaketana fanaraha-maso Ny fampiasana ny tadin'ny tariby vy dia tsy maintsy dinihina sy voarakitra matetika. Ankoatry ny fanadiovana sy famenon-tsolika voalaza etsy ambony, ny votoatin'ny fizahana mahazatra dia tokony hojerena ihany koa raha toa ka misy ny haingo, ny tariby tapaka, ny harafesina ary ny matauza, ny peratra ary ny fanosorana. Fitaovana ny faritra marefo toy ny lalan-kely amin'ny kodia. Izay tsy ara-dalàna rehetra dia tsy maintsy ahitsy na soloina ara-potoana.